ချစ်သူများနေ့အတွက်ရုပ်ပုံ၊ ထိုအထူးနေ့အတွက်ချစ်ခြင်းပုံတူ | လက်မှုပညာ
Ale Jimenez | | စက္ကူလက်မှုပညာ, ချစ်သူများနေ့အတွက်လက်မှုပညာ
တစ်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ရောက်လိမ့်မည် ချစ်သူများနေ့တစ်ရက်နှင့်တစ် ဦး လက်ဆောင်များပေးသောချစ်သူများအတွက်အထူးနေ့ရက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များသည်ဤအကျိုးကျေးဇူးကိုယူပြီးစားသုံးမှုကိုများစွာတိုးပွားစေသည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ငါဒီနေ့အတွက်မင်းကိုအရမ်းအေးအောင်လုပ်တာငါပြမယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောဤပန်းချီကားတွင်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခြင်းအားဖြင့်သင်ပြနိုင်သည် သင်၏လက်ဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ငါဟာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စုံတွဲတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ အသေးစားအသေးစိတ် မည်သည့်လက်ဆောင်ထက်ချစ်ရသူအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်ပန်းရောင် cardstock ။
ငါတို့လုပ်မယ် ပုံးထဲမှာသေတ္တာ နှင့်အထဲတွင်တစ် ဦး ဘဲဥပုံစက်ဝိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထားရန်။
စတုဂံနှင့်အတွင်းစက်ဝိုင်းကိုaပေါ်တွင်ရေးပါ အနီရောင် cardstock ထွက်ခုတ်ဖြတ်.
ငါတို့ Paste နောက်ကွယ်မှဓာတ်ပုံ.
လုပ်ဆောင် corazones ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်၏။
ဆင်ယင်မွမ်းမံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းချီကားငါတို့အကြိုက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်နှလုံးသားများ gluing ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ၁ မိနစ်ထက်နည်းသောကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်လက်ကောက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » စက္ကူလက်မှုပညာ » ချစ်သူများနေ့အတွက်နှလုံးဘောင်
ပွဲတော်ကြီးအတွက်ငါး ဦး ထုပ်